အားလုံးအားလုံးနဲ့....ခုလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ခွ& — MYSTERY ZILLION
Glad to see u in MZ par Oasis .... and we are warmly welcome ... :6:
ask question for what u don't know and give answer for what u know .. :5:
The only one i want to say sorry is " I am not familiar with Myanmar Font " so that I rarely type in Myanmar.
Anyway ... I recognize u as new MZ friend.
Have nice times in MZ.
oasis ရေ မင်္ဂလာပါ ... နာမည်ကအေးချမ်းလိုက်တာ ... မျက်စိထဲတမ်းမြင်တာပဲ ... ရေသန့်ဘူးကြီးကို
စတာနော် ... welcome ပါဗျာ ... နောက်လဲလာလည်ပေါ့ ... MZ ကလူတွေခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ ... ကျနော့်ကိုလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုသဘောထားနိုင်ပါတယ် ....
вЂњကိုвЂќ မဟုတ်ဘူး вЂњမвЂќ ပါကွယ် အပေါ်ကိုသေချာကြည့်ပါဦး ကျွန်မသည် မှာလေ :d
oasis05 wrote: »
ကူတော့ ကူညီပါမယ်။ ဒါပေမယ့် မဆုံးမပါဘူး။ ဘဘုန်းကြီး မဟုတ်ဘူးလေ။ မအိုအေစစ် ကိုဆုံးမဖို.ဆိုရင် ကျနော်တို. အရင် ဘုန်းကြီးဝတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဟီးမလုပ်ပါနဲ.။ လုပ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်။
တွေ.ရတာ ဝမ်းသာပါသည် မမ အိုအေစစ်သုညငါး။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီတစ်ခါတော့ အိုင်းစတိုင်း နောက်ကျသွားသည်။
အိုအေစစ် ရေ မင်္ဂလာပါ။
ြ:6::6: warmly welcome ပါအိုအေစစ် ၊ မသိတာရှိရင်မေးနော် ၊ အားမနာနဲ့့သိလား ။ ဖြေပေးမှာပေါ့ ။..။
ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ဘူး။ mz ကတစ်ခြားမန်ဘာတွေလေ..။ အဟီး..နောက်တာနော် :D ။
ကျွန်တော်ကဇေယျာလင်းဟိန်းပါ။ အစ်မလိုပဲ mz member တစ်ယောက်ပါ ။
မအိုအေစစ်ဆိုတဲ့ ပျိုမေအသစ်ရေ။ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် အမက အလွတ်လား အကြော်နဲ့လားဟင်။ အလွတ်ဆို ကျွန်တော့ဆီလာ။ အကြော်နဲ့ဆို mm_legend ဆီသွား။ mm_legend ကအကြော်ညှပ်တယ်လေ (အရေးထဲ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်နဲ့မှားနေပြ)ီ။ ခင်လို့စတာ စိတ်မဆိုးပါဘူး အဲလေ စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။
ရောသမမွှေတာပါ။ :d အရင်တုန်းက ပြန်လည်နေရာချထားရေးမှာ အရာရှိလေ။အိုင်းစတိုင်းက ကျနော့် အထွေထွေအတွင်ရေးမူးလေ။ :d
မေးပေါ့ ဖြေပေးမှာပေါ့ admin တွေရှိတယ် ဟဲဟဲ